Metro အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ဖြစ်ပွားမှုရောဂါ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Metro Istanbul အတွက်ရောဂါအစီအမံ
25 / 03 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ, ဓါတ်ရထား
မက်ထရို istanbul အတွက်ကပ်ရောဂါအစီအမံ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြproblemနာဖြစ်လာသည့် coronavirus ကပ်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်သည့်နယ်ပယ်အတွင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းနှင့်လူတ ဦး ချင်းစီသည်အရေးကြီးသောတာ ၀ န်များရှိသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အလုပ်လုပ်ဘူတာရုံနှစ်ဦးစလုံး၏ကျန်းမာရေးနှင့်အဆက်အသွယ်၏ခရီးသည်နှင့်ဝန်ထမ်းများကာကွယ်ပေးရန်ဒေသများရှိရာတစ်နေ့ထက်ပိုမို2သန်းခရီးသည်-တင်ဆောင်လာသော Metro အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အတူတူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့ရထားလမ်းအော်ပရေတာနှစ်ဦးစလုံးခရီးသည်ကိုယ်စားရက်နေ့တွင်, ဘူတာနှင့်ရုံးခန်းများသော်လည်း, ထိုကျောင်းဝင်းသာန်ထမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအ refectory, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဂိုဒေါင်၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်သင့်တော်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Covid-19 - Coronavirus အသစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
တရုတ်နိုင်ငံ Wuhan မြို့မှ ၂၀၂၀ ဇန်န ၀ ါရီလအစောပိုင်းတွင်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားကိုနာမည်ပေးခဲ့သည်။ Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်၎င်း၏အာဏာပိုင်များကသိသော်လည်းလူကိုရောဂါမဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်းတိရိစ္ဆာန်မှလူမှလူသို့၎င်း၊ ယနေ့ခေတ်ကုန်သွယ်မှုသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးသွားခြင်းတွင်အစွမ်းထက်ခြင်းနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤအရာကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပွားမှုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလေ့လာမှုများနှင့်လေ့လာမှုများအရ Metro Istanbul မှပြုလုပ်သောအစီအမံများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Metro Istanbul ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကပ်ရောဂါကိုမတွေ့မြင်ရသေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့်အတူကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအော်ပရေတာများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအား ဆက်သွယ်၍ အဆက်အသွယ်များပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအစီအစဉ်များနှင့်လေ့လာမှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Metro Istanbul Workplace Health Board မှကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ရှင်းလင်းချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းဖြစ်ပွားသည့်ဖြစ်ရပ်များတွင်ဆောင်ရွက်ရန်အစီအမံများ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများစတင်ခြင်းများကို Metro Istanbul Workplace Health Board မှကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ထားအရေးယူမှုအစီအစဉ်TÜRSİD (တူရကီရထားစနစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ) လည်းအတူမျှဝေခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ဘဝအောက်ပါကြိုတင်ကာကွယ်မှုများရှိခဲ့ဖြစ်ပွား၏ပြန့်ပွားကာကွယ်တားဆီးဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်အတွက်ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မြို့ပြရထားလမ်းစနစ်များနေ့တိုင်းကျော်ကို2သန်းခရီးသည်သယ်ဆောင်တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအော်ပရေတာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ထမ်း။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ဘူတာများရှိကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်နှင့် turnstiles ၏အတွင်းပိုင်း,ရိယာများ၊ လက်မှတ်စက်များ၊ ဓာတ်လှေကား၊ စက်လှေကားများ၊ စက်လှေကားများ၊ ပုံသေလှေကားရထားလမ်းများနှင့်ထိုင်ခုံများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသည်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများဆက်သွယ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မျက်နှာပြင်များသည်ထိရောက်သောပိုးသတ်ဆေးပစ္စည်းများဖြင့်ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာပိုးသတ်ဆေးဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးခံခဲ့ရသည်။ အသုံးပြုသည့်ပိုးသတ်ဆေးကိုမြူဆွယ်သောနည်းဖြင့်အသုံးပြုပြီး၊ လူ၏ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေသည့်ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးများပါ ၀ င်သည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသည်များအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကိုလျှော့ချရန်နှင့်၎င်းတို့အားမှန်ကန်စွာအကြောင်းကြားရန်အတွက်ပိုးသန့်ဆေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးလေ့လာမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပုံများကိုပြင်ဆင်ထားသည်။ ဒီအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင်တွေ၊ လူမှုမီဒီယာအကောင့်တွေနဲ့ကားနဲ့ဘူတာတွေမှာမျှဝေခဲ့ရတယ်။
4. ခရီးစဉ်အတွင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော၊ ကျန်းမာရေးဌာနသို့သွားရန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ပေးရန်တောင်းခံထားသောခရီးသည်များအတွက်မျက်နှာဖုံးများစတင်ပေးခဲ့သည်။
5. ခရီးသည်အရေအတွက်နည်းပါးလာသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသည်များအား IMM ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီမလုပ်မိစေရန်ဆက်လက်ပျံသန်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
6. ဒုတိယအကြိမ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီ Night Metro ပျံသန်းမှုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
TF90 Maçka-Taşkışlaနှင့် TF1 Eyüp-Piyer Loti tefelerik လိုင်းများသည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသောကြောင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့သည်။
9. ခရီးသည်များအား“ သင်၏လူမှုအကွာအဝေးကိုအကာအကွယ်ပေးသည်” ကိုရထားလမ်းစနစ်သုံးယာဉ်များတွင်သတိပေးရန်, ထိုင်ခုံသတိပေးချက်ပါသည့်စတစ်ကာများကိုယာဉ်များကိုစတင်အသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
1. ခရီးသည်များနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်ရှိသည့် ၀ န်ထမ်းများအားတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးသင်တန်းပေးခြင်းနှင့်သူတို့၏လုပ်ငန်းခွင်နေရာများတွင်သန့်ရှင်းရေးအကြိမ်ရေတိုးမြှင့်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
3. M5 Üsküdar-Çekmeköyမောင်းသူမဲ့ metro လိုင်းယာဉ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော SMAMP (Driverless Metro Emergency Response Personnel) ၏သန့်ရှင်းမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
4. IMM နှင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနတို့၏ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချက်ချင်းလိုက်နာခဲ့ပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အလေ့အကျင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားမျှဝေခဲ့သည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဝင်းများ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ဘုံနေရာများ၊ လမ်းနှင့်ရထားလမ်းယာဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများအပါအ ၀ င်အဆက်အသွယ်တိုင်းတွင်ပိုးသန့်ဆေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ရာသန့်ရှင်းရေးအကြိမ်ရေများပြားခဲ့သည်။
7. နာတာရှည်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ၊ မသန်စွမ်းမှုများ၊ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်အသက် ၆၀ ကျော်သောကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာခွင့်ရက်ကိုသမ္မတ၏အမိန့်နှင့်အညီလျှောက်ထားခဲ့သည်။
8. ကျွန်ုပ်တို့၏ O ၀ န်ထမ်းများအတွက် #evdekal လျှောက်လွှာအား ၀ န်ထမ်းအနည်းငယ်သာအဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစနစ်များအားတတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့် #evdekal application ကိုထောက်ပံ့ရန်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့သည်။
9. စားသောက်ခန်းမများနှင့်လက်ဖက်ရည်မီးဖိုများတွင်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအလေ့အထများတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးထိုဌာနများရှိ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုတားဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်များချမှတ်ခဲ့သည်။ အစားအစာဖြန့်ဝေရာတွင်ပိတ်ထားသောအထုပ်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုစတင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးစီမံချက်များတွင်ကော်ဖီဆိုင်နှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၀ န်ထမ်းများအားနေ့စဉ်နောက်ဆက်တွဲထည့်သွင်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
10 ။ နိုင်ငံခြားခရီးသွား ၀ န်ထမ်းများကိုကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးဌာနအောက်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
11 ။ ပေးသွင်းသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတယ်လီဖုန်းနှင့်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ရန်နှင့် visit ည့်သည်များနှင့်ကုမ္ပဏီ၏လည်ပတ်မှုများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအကြောင်းကြားခဲ့သည်။
12 ။ Emergency Action Plan ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်မူများကို OHS ကော်မတီရှိ“ coronavirus” အစီအစဉ်နှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Action Plan ကို ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကိုမျှဝေပေးခဲ့သည်။
13. အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ကွန်ဖရင့်များစသည့်ပြင်းထန်သောပါ ၀ င်မှုလိုအပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။
14 ။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ခရီးသည်များအားမကြာခဏဝေမျှပေးသည်။
လေ့လာမှုများအပြီးတွင်ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်းအစီအစဉ်များ၊ ခရီးသည်များမှပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုများ၊ IMM နှင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနတို့၏ရှင်းလင်းချက်နှင့်သတိပေးချက်များကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက်အဆင့်အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။
မြေအောက်ရထားနှင့် izban အတွက်တိုးမြှင့်လုံခြုံရေးအစီအမံများ
အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ် Tech မှ '' ထုတ်ဝေရန်အတွက်နည်းပညာမဂ္ဂဇင်း
တင်ဒါအသိပေးချက် - TÜLOMSAŞစက်ခေါင်းစက်ရုံ၏ခေါင်မိုးအတွက် OHS အစီအမံများအရ…
ပြင်သစ်တွင်အဓိကမီးရထားဘူတာရုံ, နောက်ထပ်လုံခြုံရေးအစီအမံများ (ဗီဒီယို) လာ
ပြင်းထန်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများအတွက် Marmaray အတွက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်
ဆောင်ရွက်ချက်များ izban ထံမှဒဏ်ခတ်